जितेन्द्र देवकाे प्रश्न -विहार र यूपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? - Himali Patrika
जितेन्द्र देवकाे प्रश्न -विहार र यूपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ?
हिमाली पत्रिका ८ असार २०७७, 12:19 pm
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानबारे कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने प्रावधान बहुमतले पारित गरेको थियो।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद देवले नेकपालाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। नेकपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिन उपर्युक्त हुने निर्णय गत शनिबार गरेको थियो।
‘विहार र यूपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने? प्रगतिशील पार्टीले राख्ने मानसिकता यस्तो होइन। यो अत्यन्त मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो। प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता हो। पुनर्विचार होस्,’ सांसद देवले राष्ट्रियसभामा भने।
यदि नागरिकताको उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आए कम्युनिष्ट एकतातिर र कांग्रेसलगायत अरू दल अर्कोतिर उभिने उनको भनाइ छ। नेकपाकाे नागरिकता सम्बन्धी निर्णयले नेपाल र भारतबीच रहेको सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पुर्याउने उनले बताए।
‘तपाईंहरूले अत्यन्त अदूरदर्शी, अपरिपक्क, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने निर्णय गर्नुभयो,’ उनले भने।
दुबै छिमेकीप्रति समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्नेमा एउटा छिमेकीतिर नेकपा ढल्किँदै गएको विगत दुई वर्षका गतिविधिले देखिने उनको भनाइ छ।
‘तपाईंहरू ५० चोटि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिटिङ गर्नुस्, कांग्रेसलाई भन्नु केही छैन,’ उनले भने, ‘तर हामी चिनियाँ क्याम्पमा गयौं भन्ने म्यासेज गइरहेको छ। के यसले आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो गर्छ?’
उनले के आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान सात वर्ष राखिएको भन्ने प्रश्न गरे।
‘नेपाल र भारतबीच कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। विहार र युपीमा मधेशीको सम्बन्धले नेपाली राष्ट्रियता खतरामा जान्छ भन्ने नेकपा कार्यकर्ता भन्ने गर्छन् के यो सत्य हो?’
नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध कम्युनिष्ट र कांग्रेसले स्थापना नगरेको उनले बताए।
‘यो ֹसंस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो कसैले तोड्न सक्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध कट गर्ने गरी तपाईंहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
उनले भविष्यमा यही विषयलाई लिएर राजनीतिक दुर्घटना भए कांग्रेस, कम्युनिष्ट सँगै जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताए।
‘वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म जुलुस निस्केको छ। कांग्रेसलाई हेप्ने। कांग्रेसलाई हेपेर जनतासमाजवादीलाई हेपेर राजनीति हुन्छ यो मुलुकमा?,’ उनले भने, ‘सहमतिको राजनीति नतोड्नुस्।
तपाईंहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। उग्रबादमा फस्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेस र अरू पार्टीसँग भिड्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ।’